मिहिनेत अनुसारको नम्बर किन आएन ? | PaniPhoto
मिहिनेत अनुसारको नम्बर किन आएन ?
paniphoto / June 14, 2012 /2Comments
(भर्खरै एसएलसी उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीले नाम नखुलाई पठाएको लेख)
Tags: मिहिनेत अनुसारको नम्बर किन आएन ? / Posted in: नोट अफ डिसेन्ट
सञ्जिव कोइराला says:
June 14, 2012 at 10:04 pm / Reply
भाइ नेपालको शैक्षिक अवश्था यस्तै दयनिय छ । गाउँमा फेल भएको भएे छन् तर शहरका प्लस २ मा विद्यार्थी पुग्दैनन् भनेर पास गराउँन लगानी गरेको गरै छन् । गाउँमा हुनु र नेपालीमा पढ्नु नै अहिलेका गरिव विद्यार्थीको दोष हो ।
अरु केही नसोच । राम्रो पढ । भविष्य तिम्रै हो । एसएलसीको नम्बर अबको दिनमा ठुलो हुदैन ।
अनन्त बराइली says:
June 14, 2012 at 11:15 pm / Reply
एसएलसीका त के कुरा भयो र यसमा पास हुनु भनेको ११ पढ्न पाउँनु मात्रै हो अरु केही होइन तर च्याउ सरी खुलेका ११ र १२ ले चै नेपालको शिक्षालाई बजारिकरण गरिदियो ।